तपाईंको ब्लग RPMs पेग गरीएको छ, तर तपाईं रेस जीत छैन! | Martech Zone
तपाईंको ब्लग RPMs पेग गरीएको छ, तर तपाईं रेस जीत छैन!
बिहीबार, मे 10, 2007 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
यस ब्लगमार्फत अन्य ब्लगरहरूलाई प्रदान गर्न मैले गरेको सहयोगलाई बाहेक, म वास्तवमै केही ब्लगर्सलाई सहयोग गर्दछु। दुर्भाग्यवस, मैले गर्न चाहेको भन्दा बढी समय खर्च गर्न पाउँदिन - मैले बिलहरू तिर्ने काम गर्नुपर्‍यो। हिजो मैले दिनको बिदा लिएँ र क्षेत्रीय वेब कन्फरेन्समा भाग लिएँ। सम्मेलन शानदार थियो, कम्प्याक्ट दिन १ घण्टा सत्रहरू भरिभयो जुन वेब पेशेवरहरूबाट जानकारीले भरिएको थियो।
शुरुवात ब्लगिंग सत्र प्याक गरिएको थियो! जब तपाईं एक बर्ष भन्दा बढि ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं बिर्सनुहुन्छ कि धेरै व्यक्तिहरू ब्लग वा अन्तर्निहित टेक्नोलोजीहरूमा पर्दैनन्। सत्रको एक उत्तम प्रश्न थियो, "म कसरी ब्लग र अर्को वेबसाइट बीचको भिन्नता भन्न सक्छु।" मैले वास्तवमै एक मिनेट सोच्नु पर्ने थियो, त्यसपछि व्याख्या गरे कि तपाई अब भिन्नता अरुलाई भन्न सक्नुहुन्न। धेरै नयाँ वेबसाइटहरूले सामग्री अनुभागको मानकको रूपमा ब्लगि incor समावेश गर्दछ। अवश्य पनि, मेरो जस्तो साइटहरू 'ब्लग जस्तो' देखिन्छन् - रिभर्स कालक्रम क्रममा गृह पृष्ठमा पत्रिका पोष्टहरूको स with्ग्रहको साथ ... तर केही अरूहरू नजिक पनि आउँदैनन्।
को ब्लगिंग हुनु पर्छ?
अर्को ठूलो प्रश्न सोधिरहेको थियो कसरी ब्लगिgingले गैर-टेक्निकल वा राजनीतिक उद्योगहरूमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। ब्लगहरूले राजनीतिमा आफूलाई उधारो दिन्छन् किनभने ठुलो हिस्टेरिया र नगद छ। ब्लगहरूले सँधै आफैंमा टेक्नोलोजीमा राम्रो उधार दिएका छन् किनकि यसलाई सामना गर्न दिनुहोस्, एक सफल ब्लगरको रूपमा प्राय: टेक्नोलोजीको लागि उच्च योग्यता चाहिन्छ। ब्लगहरू बिल्कुल गर्न सक्छ कुनै पनि उद्योगमा सहयोग गर्नुहोस्, यद्यपि! पछिल्लो ब्लगि eng इञ्जिनहरू र सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूले धेरै विकल्पहरू स्वचालित छन् जुन एक पटक म्यानुअल थियो।
मेरो साथी, ग्लेन, मोजाम्बिकमा मिसनमा थिए। म छक्क छु कि धर्म र परोपकारीहरूले ब्लगिging अधिक अपनाएनन्। फ्रेड विल्सन ब्लगहरू एक उद्यम पूंजीवादी हुनुको बारेमा। मँ सबै उद्योगहरूमा अचम्मित छु कि ब्लग नगर्ने। किन वैज्ञानिकहरू ब्लग गर्दैनन् र उनीहरूका खोजहरू साझा गर्दैनन्? किन स्टोर खुल्ला, ग्राहक सेवा, र विशेषको बारेमा फुटकर विक्रेताहरू? किन राष्ट्रपति ब्लग छैन? (कसैले पनि मूर्ख रेडियो कार्यक्रम सुन्दैन!) किन पुलिस ब्लग गर्दैन र समुदायमा उनीहरूले गरिरहेका फरकको बारेमा कुरा गर्दैनन्? किन शिक्षकहरू ब्लग गर्दैनन् र विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो दिन साझा गर्दैनन्? तिनीहरू वास्तवमै हुनु आवश्यक छ !!!
ब्लगिंग र सामग्री प्रबंधन प्रणाली रूपांतरण
वेबसाइटको उदाहरण जुन ब्लग जस्तो केहि पनि देख्दिन CNET। यो CNET को समाचार सेक्सन वास्तवमा शब्दको प्रत्येक अर्थमा एक ब्लग हो। लेखहरू उल्टो कालक्रम क्रममा छन् र प्रत्येक लेखको एक परमलिन्क हुन्छ, लिंकहरू, टिप्पणीहरू, पिंगहरू, र केही सामाजिक बुकमार्क गर्ने लिंकहरू समावेश गर्दछ। तर यो एक समाचार साइट हो ??
सामग्री प्रबन्धन प्रणाली ब्लगि with… वा यसको विपरित समात्दै छन्। वेब अनुप्रयोग प्रदायकहरूले पहिचान गर्दछ एसईओ ब्ल्गिंगका फाइदाहरू र ती सुविधाहरूलाई तिनीहरूका अनुप्रयोगहरूमा एकीकृत गरेका छन्। तर तिनीहरूले अझै धेरै समस्याहरूको समाधान गरेनन्, यद्यपि! हिजो म सफल हुन तपाईंको शक्ति मा केन्द्रित बारेमा लेख्नुभयो.
ब्लगिंग कुनै फरक छैन। टेक्नोलोजीको लाभ उठाउने धेरै कुरा छ, र तपाईंको सामग्रीको फाइदा उठाउनको लागि धेरै कुरा छ। धेरै व्यक्तिले अविश्वसनीय सामग्रीका साथ शानदार ब्लगहरू लेख्छन तर उनीहरूको साइट बढ्न असफल हुन्छ ... किनभने यो नराम्रो ब्लग होईन, बरु किनभने ब्लगरले नयाँ पाठकहरूलाई आकर्षित गर्न टेक्नोलोजी बुझ्दैन र त्यसको शोषण गर्दैन।
जिज्ञासाको बाहिर, म googled ब्लग कोचिंग। म नामहरू लिन गइरहेको छैन, तर मैले ती कम्पनीहरू वा व्यक्तिको साइटका दर्जनौं साइटहरूको समीक्षा गरें जुन आफूलाई 'ब्लग कोच' को रूपमा वर्गीकृत गर्दछ। तिनीहरू मध्ये एक पनि वास्तविक प्रविधिको बारेमा कुरा गरिएन! विवरणहरू समीक्षा गर्दा, धेरै जसो "ब्लग कोचहरू" केवल प्रतिलिपि लेखक र ब्रान्ड रणनीतिकारहरू थिए। कुनै श doubt्का छैन कि यी एक कर्पोरेट ब्रान्डको आवश्यक तत्वहरू हुन्, तर geesh।
मलाई लाग्छ यो कार रेसिcing जस्तो छ र वास्तवमा कहिल्यै गियरहरू शिफ्टिंग गर्दैन। तपाईको इञ्जिन यो सक्दो चाँडो रिभ्भिंग गर्दैछ, तर सबैजना तपाई द्वारा उडान गर्दैछन् र तपाईले किन बुझ्नुहुन्न! तपाईलाई वास्तवमै एक कोच चाहिन्छ जसलाई पूरै कारले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्दछ यदि तपाई दौड जित्नु चाहानुहुन्छ, केवल ड्राइव कसरी गर्ने भन्ने छैन। तपाईलाई कोही चाहिन्छ जो ब्लग र ब्लगि software सफ्टवेयरबाट बाहिर गति र शक्ति को हरेक अन्तिम बिट निस्किन्छ। मेरो सफलताका साथ ब्लगिंग दुबैको संयोजन भएको छ। मैले महसुस गरेको छु कि कहिलेकाँही मैले राम्रो लेख्दिन, तर म यसको इञ्जिनबाट हर्स पावरको प्रत्येक औंस ट्वीक गरेर यसको लागि तयार गर्दछु।
टैग: ब्लग कोचब्लगि coach कोचCMSसामग्री व्यवस्थापन प्रणालीफ्रेड विल्सन
टाइगर वुड्स आफ्नो कमजोरीमा काम गर्दैन
संक्षिप्त: डेड र डिआटोको अर्थ के हो?
मई 10, 2007 मा 10: 33 PM
राम्रो लेख डग।
तपाईं कुन वेब कन्फरेन्समा भाग लिनुभयो? म शिकागोमा यस साताको अन्तीममा भाग लिइरहेको छु।
म तपाइँको सम्मेलन बाट तपाइँ जस्तै यो बाहिर एक धेरै प्राप्त गर्न को लागी आशा गर्दछ।
MyBlogLog, VideoSticky र BlogTalkRadio का नाममा केहि व्यक्तिहरू हातमा हुनेछन्। यो वास्तवमै जानकारीमूलक हुनुपर्दछ।
म तपाईं र तपाईंको पाठकहरूसँग सप्ताहन्तमा मैले सिकेको कुरा साझा गर्न निश्चित छु।
मई 11, 2007 मा 1: 07 एएम
म ब्लगहरू सेट अप गर्न मद्दतको लागि केहि गैर-नाफामुखी संस्थामा काम गर्दैछु। उनीहरूले पहिले कसैलाई आफ्नो साइटमा html सम्पादन गर्न धेरै आधारभूत चीजहरूको लागि भुक्तान गरिरहेका थिए किनभने उनीहरू कोडिंगलाई गडबड गर्न डराउँथे…
एक पटक मैले तिनीहरूलाई देखाए कि तिनीहरू सजिलै ब्लग मार्फत आफ्नै न्यूजलेटरहरू / बुलेटिनहरू बनाउन सक्दछन्, तिनीहरू तुरून्त यसको साथ प्रेममा परिणत भए।
मई 11, 2007 मा 10: 10 एएम
म वास्तवमा बुधवारको सानो "उन्नत" सत्रमा थिएँ, तर मैले अझै समय र कुराकानीबाट आनन्द उठाए। समय लिनु भएकोमा धन्यबाद।
म करीव साढे तीन वर्षदेखि व्यक्तिगत रूपमा ब्लग गर्दैछु (मलाई लाग्छ कि मेरा अभिभावकहरू मेरो सबैभन्दा ठूला पाठकहरू हुन्!), र म ब्यवसायिक रूपले ब्लगि using प्रयोग गर्ने एक ठूलो समर्थक हुँ। बरु अद्वितीय गैर नाफामुखीमा काम गर्दै, यद्यपि मैले घटकहरू सूचित गर्न र फिल्म निर्माताहरूलाई चिन्न हाम्रो मिसनको लागि "बिक्री" र "ग्राहकहरू" को बारेमा सल्लाहहरू समायोजन गर्नु पर्दछ। मैले सोध्ने मौका प्राप्त गरेन, तर म तपाईंको विचारहरूमा उत्सुक छु कि कसरी ब्लगिgingको transperancy एक निगम बनाम एक गैर नाफा दिन सक्छन्।
सम्मेलनको भाग हुनको लागि पुन: धन्यबाद!
मई 11, 2007 मा 10: 37 एएम
मलाई सम्मेलनमा जान मनपरायो। मान्छेहरूको कस्तो ठूलो समूह, सबै जना यति उत्साहित र सहभागी थिए। म मद्दत गर्न सक्दिन तर आफैमा उत्साहित भएँ (सायद यो मेरो भेन्टी मोचा हो!)।
गैर-नाफा एक आश्चर्यजनक समूह हो। म यहाँ एक जोडीसँग स्थानीय रुपमा भेटिरहेको छु र सोशल नेटवर्कि aboutको बारेमा बढि कुरा गरिरहेछु। मलाई लाग्छ त्यहाँ दुईवटा अवसरहरू छन्:
१. गैर नाफाको बीचमा जानकारी साझा गर्दै। म उनीहरू बीच धेरै प्रतिस्पर्धा देख्दिन, उनीहरू आश्चर्यजनक छन् उनीहरूले सँगै मिलेर काम गर्ने कति प्रयास गरे! स्थानीय समुदायलाई सँगै ल्याउन ब्लगमा जानकारी राख्नु भनेको सुझावहरू र जानकारी वितरण गर्ने र समग्र क्षेत्रीय गैर-नाफामुखी मद्दत गर्ने तरिका हुन सक्छ।
२. तपाइँका योगदानकर्ताहरू र ग्राहकहरूसँग जानकारी साझा गर्दै। साधारणतया एक कम्पनीलाई कल गरेर 'गैर-नाफा' ले मलाई shoestring बजेट र अविश्वसनीय चुनौतीहरू सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। स्थानीय रूपमा, मलाई थाहा छ कि इन्डियानापोलिस सिम्फनी एक नाफा नकमाउने हो र उनीहरू कुनैको व्यवसाय जस्ता संसाधनहरू तान्न सक्षम छन्। मलाई लाग्छ कि उनीहरूका योगदानकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्न यो सार्थक हुनेछ! मलाई लाग्छ कि व्यक्तिहरू ती रकमहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् भनेर साझेदारी गर्न बढी इच्छुक हुनेछन्। (साथै स्थानीय घटनाहरू, आदि लाई बढावा दिदै)
मैले हिजो राति इन्डियानापोलिस सांस्कृतिक ट्रेल मानिसहरूसँग कफी खाएँ र उनीहरूले छलफल गरे कि कसरी स्टार र कला र मनोरन्जन कभरेज स्टारमा पूरा दक्षिणमा पुगेको छ। तिनीहरूलाई शब्द पाउनको लागि उनीहरूलाई सस्तो बाटोहरू चाहिन्छ र ब्लग यो गर्न उत्तम साधन हो!
म कफीको लागि भेट्न चाहन्छु र चर्चा गर्दछु कि कसरी म तपाईंलाई मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु!
मई 11, 2007 मा 1: 29 PM
यी मध्ये केही 'ब्लग कोच' मलाई पुरानो सर्प तेल विक्रेताको सम्झना गराउँछ। दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्!
मई 11, 2007 मा 7: 15 PM
हो - एउटा चीजले मलाई चाखलाग्दो फेला पारे त्यो त्यो हो कि धेरै धेरै 'कोचहरू' ब्लगमा आफैंमा ब्लग थिए। यदि तपाईं आफैंमा ब्लग गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाईं कसरी टेक्नोलोजीमा रहिरहनुहुन्छ र 'ब्लागस्फेयर' मा परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
यो एक एसईओ परामर्शदाता भाँडा जस्तै हो कि एक वेबसाइट छैन। धेरै अचम्म!